नेपाल पर्वतारोहण संघ(एनएमए)को निर्वाचन मिती नजिकिदै गर्दा नेतृत्वका आकांक्षीहरु मैदानमा उत्रिएका छन । यही जुलाई २८ र २९ तारिकमा हुने निर्वाचनले नयाँ नेतृत्वको टुंगो लाग्नेछ । नेपालको पर्वतिय पर्यटन तथा हिमाल आरोहणको एकमात्र जिम्मेवारी लिएको एनएमएमा पछिल्लो समय जलबायु परिवर्तन र व्यावसायी तथा आरोहीको मुख्य चुनाबी मुद्धा बन्दै गर्दा एनएमएको नेतृत्वमा बर्तमान अध्यक्ष आङछिरीङ शेर्पाको भुमिका महत्वपुर्ण रहिआएको छ । २००२ देखी १७ सम्म आईपुग्दा ३ कार्यकाल एनएमएको सफल नेतृत्व गरेका शेर्पाले अब भने आफु बाहिर बसेरै एनएमएलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेसँगै नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको व्यवसायी तथा पर्वतीय पर्यटनमा चासो राख्ने व्यक्तिहरु आफ्नो पक्षमा जनमत तयार पार्न कम्मर कसेर लागेका छन ।
प्रश्तुत छ, एनएमएको आगामी निर्वाचनको सरगर्मी, नेतृत्वको बहस र अबको कार्यनितीमा केन्द्रित रहेर एनएमएका बर्तमान अध्यक्ष आङछिरीङ शेर्पासँगका यी सवाल ।
एनएमएको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा नेतृत्वमा आकांक्षीहरु बढ्दै गएका छन, तपाईको योजना के छ ?
नेतृत्वमा यसपटक मेरो दाबेदारी छैन । नयाँ साथीहरुलाई बाटो खुल्ला छ ।
तिन बर्ष एनएमएको नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो, थकाई लाग्या त होईन ?
होईन, मेरो ज्ञानसिपले जानेसम्म मैले यसबिचमा योगदान पुर्याए, अब नयाँ साथीहरुलाई अवसर दिउँ भन्ने लागेको छ ।
तपाईको आवश्यक्ता फेरी पर्यो भनेर साथीहरुले भन्नुभयो भने ?
त्यो लामो समयको कुरा हो । अहिलेमा जतिसक्दो छिटो नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर शान्त भएर बस्ने सोचमा पुगेको छु ।
भनेपछि तपाई एनएमएलाई संकट पर्यो भने पनि हेरेर बस्नु हुन्छ ?
मैले कहाँ त्यसो भन्या हो र । नयाँ साथीहरुलाई बाटो खुल्ला गरिदिने कुरा मात्र गरेको हुँ । तपाईले भनेजस्तै घरमा आगो लाग्दा कुनैपनि अभिभावकले आँखा चिम्लदैन । कुरा यही हो ।
आङछिरीङ शेर्पाको समर्थनले एनएमएमा बाजी मार्न सकिन्छ भन्नेहरु धेरै छन, तपाईको समर्थन कसलाई ?
म आजका मितीसम्म एनएमएको नेतृत्वमा बसेका नाताले मैले कसैको नाम लिन मिल्दैन, लिन्न । सर्वसम्मत भएर आउने जुनसुकै नेतृत्वमाथि मेरो समर्थन छ ।
तर एनएमएमा तपाईलाई गुटबन्दी गरेको आरोप छ नी ?
हाहाहा...... । म आङछिरीङ हुँ । कसैको आङमा चढीरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । राम्रो सोच राख्ने व्यक्तिहरुमाथि प्रहार अन्त त हुने गरेकै थियो, यहाँपनि रहेछ भनेर बुझौला । यसमा मेरो टिप्पणी छैन । मेरो ईतिहाँस पल्टाउँदा आफै थाहा हुने कुरा हो ।
तिन कार्यकाल एनएमएको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो, एनएमए के रहेछ ?
नेपाल पर्वतारोहण संघ(एनएमए) पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने एक मात्र पर्यटकीय संस्था हो । यसअर्थमा हामी सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै पर्वतिय पर्यटन, बातावरण बचाउ अभियान तथा जलबायु परिवर्तन तथा हिमाल आरोहणको व्यवस्थापकिय जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको संस्था हो । यसबिचमा १३ वटा शाखा बिस्तार भएका छन ।
जतिबेला मैले एनएमएको नेतृत्व गरे अवस्था एकदमै प्रतिकुल थियो । नेतृत्वमा बसेको डेढमहिनापछि नै सगरमाथा आरोहणमा जुटेका १६ जना आरोही र शेर्पाहरुको हिमपहिरोमा परी मृत्यु भयो । यसअर्थमा बिभिन्न समयमा सरकारबाट हुनेगरेका हस्तक्षेपका सामु बेलाबखत आउने प्राकृतिक बिपत्तीले पनि हामीलाई आलोचित बनाएर जाने गरेको छ । निकै संयमपुर्ण ढंगले सन्तुलित सोचाईका साथ मैले त्यसबखत उद्धार र राहतको प्रवन्धमा आफुलाई समाहित गरे । त्यसपछि हामीले निरन्तर रुपमा आरोही र शेर्पाहरुको जिबनबिमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आएका छौ । बिभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक बिपत्ती त छँदै छ, बिनासकारी भुकम्प र नाकाबन्दीले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा धेरै क्षति पुग्यो, कारण जेजस्तो भएपनि पर्वतिय पर्यटनले गति लिन नसकेको अवस्थामा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले आलोचनाको सिकार हुनुपर्ने अवस्थासँग पनि जानकार छु । सरकारले पर्यटनलाई प्रमुख आर्थिक स्रोत त भन्छ, तर मौका पर्ने बित्तिकै घाँटी निमोठ्ने प्रबृत्ति पनि देखीयो । यत्तिका ऐतिहासिक आरोहणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको संस्थाको रोयल्टी खोस्ने काम बिगतमा कृपासुर शेर्पा पर्यटनमन्त्री बन्दै गर्दा त्यस किसीमका प्रबृत्ति देखीए ।
यतिबेला पनि एनएमए प्रति मेरो प्रेम घटेको थिएन र घट्ने कुरा पनि भएन, किनकी हिमालको सिरेटो र शितलता, हाँसो र दुःख सबै बेहोरेको व्यक्ति हुँ म । पर्यटनमा सम्पुर्ण जिबन व्यतित गर्दा थोरबहुत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका शुभचिन्तक आरोहीहरुको सद्भावले एनएमएलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त बनाउन सफल पनि भईयो । यसअर्थमा सरकारको मुख कहिले पनि ताकेनौ, मात्र शुभेच्छा रहोस भन्ने चाहाना थियो र छ । कम्तीमा आगामी आउने नेतृत्वले हिमाल बचाउनकै लागि संकटको सामना गर्न नपरोस । पछि आनन्द पोखरेल पर्यटनमन्त्री हुँदा रोयल्टीको जिम्मा पुनः एनएमएले प्राप्त पनि गर्यो, यसले पनि पुष्टी हुन्छ की, हामी व्यक्तिगत लाभका लागि कहिले थिएनौ र छैनौ । मेरो बुझाई यही हो अरुले के सोच्नुहुन्छ थाहा भएन । तर एनएमएको धर्म चाहि यही हो ।
अर्कोकुरा एनएमएमा रहँदै गर्दा भुकम्पपछिको अवस्थामा बिश्व खाद्य कार्यक्रमसँग सहकार्य गरेर हिमाली बस्तीमा पुरीएका शेर्पा परिवारहरुको गाँसबासको व्यवस्थामा लागिपरेको अवस्था हो भने आरोहणका क्रममा जिबनसुरक्षा र मृत्युबरण गरेका शेर्पा आरोहीहरुका परिवारलाई राहत तथा बालबच्चालाई स्नातक सम्मको अध्ययनको अवसर मेरो एकल पहलमा भएको छ । हिमाली बस्तीमा भत्केका पुलपुलेसा मर्मत गर्न लागिपरे, जलबायु परिवर्तनले हिमालमाथि खतरा छ भनेर कराईरहेको छु, बातावरणिय स्वच्छता राख्ने हाम्रो हिजोदेखीको प्रयास आजसम्म पनि जारी छ ।
यसअर्थमा यही भन्न चाहन्छु, हिमाल आरोहणलाई व्यवस्थीत पार्ने चिन्ता हिजो पनि थियो, आज पनि छ, ३ बर्षे कार्यकालमा पनि ३ पटकको नेतृत्व मैले सम्हाल्न पाउनु मेरो सौभाग्य पनि हो, भलै यसमा जोडिएका मेरा कर्महरुले मलाई नेतृत्वमा उभ्याईरहन सहयोग गरे होलान । तर पछाडी फर्केर हेर्दा कुनै कुरामा पछुतो छैन, अप्ठेरो परेको समयमा एनएमएलाई अबिचलित नेतृत्व दिए, भुकम्प तथा हिमपहिरोमा पुरीएका आरोही तथा शेर्पाका बालबच्चाको थोरबहुत आँसु पुछ्ने काम गरे, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एनएमएलाई एक निर्भिक संस्थाको रुपमा चिनाउन थोरबहुत सफल भए भन्ने लाग्छ । यसअर्थमा नेतृत्व भनेको कुर्सीमा बस्ने मात्र होईन, अभिभावक पनि हो । अबको मेरो भुमिका अभिभावकत्व रुपमा हुनेछ ।